कर्णाली प्रदेशमा मात्रै होइन सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेरफेर हुनुपर्छ नेकपा संवाद
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्व ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावले अहिले सत्तारुढ नेकपाभित्र निकै ठूलो तरंग पैदा गराएको छ । शाहीविरुद्व एकाएक प्रस्ताव आएसँगै नेकपाभित्रको पूर्वमाओवादी समूह पनि नराम्रोसँग झस्केको छ ।
पूर्वमाओवादी समूहबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीविरुद्व एकाएक प्रस्ताव आईनुलाई धेरै कोणबाट व्याख्या गरिन थालिएको छ ।
शाहीविरुद्व किन एकाएक अविश्वासको प्रस्ताव आयो ? किन प्रस्ताव ल्याइयो ? संसार न्यूज अनलाईनका सन्देश अर्यालले नेकपाभित्रको निर्णायक खेमा मानिने माधव कुमार नेपाल पक्षकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग यसबारे केहि प्रश्न गरेका छन् । प्रभावशाली नेतृ तथा नेकपाकी स्थायी समिति सदस्य शाक्यसँग पछिल्लो कर्णाली विवादबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्व नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अप्रत्यासित रुपमा दर्ता भएको यो प्रस्ताव खास के हो ? कति उचित छ ? तपाईंहरुको बुझाई के हो ?
यो घटना अप्रत्यासित रुपमा आएको देखिन्छ । यो घटनाको विषयमा नेताहरुबीच कुनै सरसल्लाह भएको देखिएन । पार्टी विधि र पद्धतिअनुसार सचिवालय वा दुई अध्यक्षबीच न्यूनतम छलफल हुनुपर्ने हो तर, त्यहाँ पनि छलफल भएको जानकारी छैन् । जुन तरिका अपनाइएको छ, यो सरासर गलत छ । यसले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउँदैन । यसले पार्टीभित्र गलत खालको परम्परा पनि स्थापित गराउँछ । कसैसँग रिस उठ्दैमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषय जायज हुँदैन् ।
सबै प्रदेश सरकारले करिब ३ वर्षको अवधि पुरा गरेका छन् । यो अवस्थामा सबै प्रदेश सरकारको कामको मूल्यांकन हुन जरुरी छ । मूल्यांकन गरेर परिवर्तन वा हेरफेरको कदम चाल्नु पनि आवश्यक छ । मूल्यांकन हुँदै गर्दा सरकार वा सरकारका नेतृत्वकर्ता फालिन सक्छन् । कतिपयमामन्त्रिहरु मात्रै हेरफेर हुन सक्छन् ।
तर, त्यो विषयमा विधिसम्मत छलफल हुन सकेको छैन् । कहाँ कसलाई राख्ने वा हटाउने भन्ने विषय पार्टीको आन्तरिक मामिला पनि हो । त्यसकारण यो गलत छ । यसलाई सच्याइनु पर्दछ ।
सबै प्रदेश सरकारले करिब ३ वर्षको अवधि पुरा गरेका छन् । यो अवस्थामा सबै प्रदेश सरकारको कामको मूल्यांकन हुन जरुरी छ । मूल्यांकन गरेर परिवर्तन वा हेरफेरको कदम चाल्नु पनि आवश्यक छ ।
स्थायी समिति बैठकले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने भनि निर्णय गरेको पनि झण्डै एक महिना पुगेको छ ।संघको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको विषय तात्दै गर्दा एकाएक प्रदेशमा यो खालको घटना सतहमा देखिन्छ । केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको विषय पर पन्छाउन यो खेलो गरिएको भन्ने कतिपयको बुझाई छ । यसमा तपाईंहरुको धारण के ?
पार्टीले गरेको निर्णयमा कसैलाई पन्छिने अधिकार छैन् । निर्णय गर्ने र त्यसलाई आत्मसाथ नगर्ने हो भने त्यसले अर्थ राख्दैन् । संस्थागत निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न नेतृत्वलाई छुट छैन् ।
तपाईंले भने झैं, स्थायी समितिको त्यो निर्णयमा नेतृत्वले ध्यान नदिए जस्तो, कता–कता बरालिए जस्तो पक्कै देखिएको छ । पार्टीभित्र तमाम सुल्झाउनु पर्ने विषय छन् । हामीले यो महिनाभित्रै पार्टी एकताका काम सक्ने निर्णय पनि गरेका छौं । सतहमा देखिएका घटनाले भने केहि गम्भीर पक्कै बनाएको छ । यो यस्ता घटना प्रायोजित त होइन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जीएको छ ।यस्ता प्रकृतिका घटनाले पार्टी जीवन नै खतरामा पार्छ ।
कतिपयले पार्टीभित्रको राजनीतिक दाउपेच कर्णालीमा देखियो भनेर टिप्पणी पनि गरेका छन् । त्यो विषय कति सहि हो ?
कर्णाली प्रदेशमा मात्रै यो तरिका अपनाउने कुरा त सिधै गलत नै छ । मान्छेहरुले टिप्पणी गर्ने विषय पनि जायज हुन्छ । स्थायी समितिले पनि सबै प्रदेशमा मूल्यांकन गरेर हेरफेर गर्नुपर्छ भनेको छ । किन एउटा प्रदेशमा यो खालको रवैया ?
हाम्रो कुरा भनेको सबै प्रदेशको एकमुष्ट फेरफेर गरौं भन्ने हो । हाम्रो प्रश्न, किन त्यता तिर नेतृत्वको ध्यान जाँदैन भन्ने हो । कहाँबाट परिचालित हुन्छन् अनि निर्देशित हुन्छन् र यस्तो घटना देखिन्छ ?के यसले पार्टी एकता दिगो बनाउँछ ?तपाईंले भने झैं एउटाले अर्कोलाई हानेर पार्टी रहँदैन । नत देशलाई नै फाईदा पुग्छ ।
हाम्रो कुरा भनेको सबै प्रदेशको एकमुष्ट फेरफेर गरौं भन्ने हो । हाम्रो प्रश्न, किन त्यता तिर नेतृत्वको ध्यान जाँदैन भन्ने हो । कहाँबाट परिचालित हुन्छन् अनि निर्देशित हुन्छन् र यस्तो घटना देखिन्छ ? के यसले पार्टी एकता दिगो बनाउँछ ?
कर्णालीको विषयले तपाईँहरुको पक्षलाई फाईदा पुग्यो भन्ने पनि विश्लेषण आएको छ । मुख्यमन्त्री हेरफेरको विषय उठाउँदै गर्दातपाईंँहरुको विषय पनि सम्बोधन हुने सम्भावना हो ?
यो सुरुवातदेखि नै मिलेको छैन् । सुरुवातमै प्रदेश सरकार बनाउँदा जसरी छलफल हुनुपथ्र्यो, जसरी सहमती खोजिनुपथ्र्यो त्यो कत्ति पनि भएन । कम्तिमा पनि प्रदेश १ र प्रदेश ३ मा मिलाएको भए पनि एउटा समझदारी हुन्थ्यो । त्यो पनि मिलाइएन ।प्रदेश ३ मा उल्टो खेल खेलेर नमिल्दो काम गरियो । त्यसले पार्टीभित्रको एकताको भावनामा निकै गहिरो गरि प्रहार गरेको छ । त्यसले गलत परम्परा पनि विकास गराएको छ ।
ती घटनाकै कारण पार्टीभित्र असमझदारी पनि विकास भएको विषयलाई अस्विकार गर्न सकिन्न ।नेतृत्वमा बस्नेले वास्तविकता स्वीकार नगर्दा देखिएका यी घटनाले पार्टीलाई आन्तरिक रुपमा निकै कमजोर पनि बनाएको छ ।
सतहमा यी घटना देखिँदै गर्दा, अब प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रिहरुको हेरफेर कसरी हुनुपर्छ ? तपाईँहरुको भनाई के हो ?
हाम्रो प्रष्ट कुरा, कर्णाली प्रदेशमा जे–जस्तो प्रस्ताव लगेर मुख्यमन्त्री फेर्न खोजीयो यो तरिका पुरै बेठिक छ । कम्तिमा पनि प्रदेश सरकारको कामको मुल्यांकन गर्ने बेला आएको छ । एउटा सरकारको होइन् सबै प्रदेश सरकारको पुरै संरचना हेरफेर हुनुपर्छ । ५ वर्षको लागि बनेको सरकारले करिब ३ वर्ष गुजारीसकेका छन् । अब सचिवालय वा शीर्ष नेता बसेर यसको गतिलो समिक्षा गर्न आवश्यक छ ।
कहाँ यथावत राख्ने, कहाँ फेर्ने भन्ने विषयमा एकमुष्ट प्याकेजमा निकास खोज्नुपर्छ । त्यसो गर्दा अनावश्यक विवाद पनि हुँदैन् अनि पार्टी एकतामा प्रश्न पनि उठ्दैन् । तर, यो घटनाले पार्टी एकतामै प्रश्न उब्जाएको छ । कता–कता विवाद बल्झीने हो कि भन्ने देखिएको छ ।
हाम्रो प्रष्ट कुरा, कर्णाली प्रदेशमा जे–जस्तो प्रस्ताव लगेर मुख्यमन्त्री फेर्न खोजीयो यो तरिका पुरै बेठिक छ । कम्तिमा पनि प्रदेश सरकारको कामको मुल्यांकन गर्ने बेला आएको छ । एउटा सरकारको होइन् सबै प्रदेश सरकारको पुरै संरचना हेरफेर हुनुपर्छ ।
अन्तिममा, कर्णालीको घटनामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष ओलीको ‘इन्टेष्ट’ जोडिएको भन्ने छ । तपाईँहरुको बुझाई के हो ?
एउटा कुरा प्रष्ट हो, कर्णालीमा त्यो खालको घटना हुँदै गर्दा शीर्ष तहमा कुनै कुराकानी भएन ।कुनै सन्दर्भ बिनै एकाएक अविश्वासको प्रस्ताव सतहमा देखियो । अनौठौ गरि एकाएक प्रस्ताव आउँदै गर्दा कतैबाट परिचालित त होइन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । जे गरिएको छ, यो पुरापुर गलत छ ।तत्काल सच्याएर फरक बाटो लिन आवश्यक छ । नेतृत्वमा बस्नेले यति पनि बुझेनन् भने त्यसको नतिजा गलत भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाईंलाई स्मरण गराऔं, प्रदेश ३ मा सुरुवातदेखि नै विवाद छ । त्यहाँ नेतृत्व चयन नै गलत तरिकाले भएको छ । तर, के हामीले कर्णालीमा गरेजस्तो रवैया देखाएका छौं र ?